[Python] ::.Sequences .:: - Pastebin.com
[Python] ::.Sequences .::
Sequences ဆိုတာ List နဲ့ တူတူပါဘဲ .. http://docs.python.org/2/tutorial/introduction.html#lists မှာ list အကြောင်းကိုရေးထားပါတယ်.. .. ..
ရှင်းရှင်းပြောရ၇င် Sequence တွေက အချက်အလက်တွေအများကြီးကိုသိုလှောင်ခွင့်ပေးတာပါ ... Slicing မှာလဲ ဒီလိုပါဘဲ .. (Slicing post အောက်မှာတင်ထားပါတယ်) ကျွန်တော်တို့ နားလည်အောင်ပြောရင် Sequence က ကိုယ့်Data တွေကိုတစ်စုတစည်းထဲ စုစည်းနိုင်ပါတယ်.... ပိုနားလည်သွားအောင် အောက်မှာ List တခုဆောက်လိုက်ပေါ့မယ်. . .
>>> mhu=['Bigboss','Mhu Nullbyte','Xero Mhu','Master Leet',' 1o1or1not1','liT2le']
အဲ့မှာကျွန်တော် list ဆောက်လိုက်ပါပြီ... mhu ကတော့ တည်ဆောက်လိုက်တဲ့ Group List ရဲ့ Name ပါ ၊ နောက်က [ ] ဒေါင့်ကွင်းထဲမှာထည့်ထားတာက mhu member တွေပါ ... items စုစုပေါင်း 6ယောက်ရှိတယ်နော် .. (အဲ့ ၆ယောက်ကို square brackets ထဲထည့်ထားတယ်နော်) တစ်ခုစီကို String တွေဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ကို အဖွင့် အပိတ်ကော်မာထဲထည့်ပေးရပါတယ် . . ဘာလို့ လဲဆိုရင် String ဖြစ်လို့ လေ... (သူပြောမှရှင်းသွားတာဘဲ :D) . အပေါ်က Eng လိုရေးထားတဲ့စာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ ... Ok ~ ဒါဆိုရင် အပေါ်က Items မှာ6ခုရှိတယ်နော် .. တစ်ခုစီမှာ သူ့ကို ခေါ်သုံးလို့ရတဲ့ Number တွေ ရှိပါတယ် ... အဲ့Number တွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ပေးရမလဲ ?? အဲ့ဒါက Python ပရိုဂရမ်မာ က အော်တိုမစ်တစ် သတ်မှတ်ပြီးသားပါ .. ကိုယ်သတ်မှတ်ပေးရမှာမဟုတ်ပါဘူး . . . ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ list တွေကိုခေါ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ . အဲ့ List တစ်ခုစီမှာ သူ့ကို ခေါ်သုံးလို့ရတဲ့ နံပါတ်တွေ ကိုယ်စီရှိပါတယ် ... အဲ့မှာကိုယ်ခေါ်ချင်တဲ့ လူ (Items) ကို သက်ဆိုင်ရာNumber ကိုတွဲပြီးခေါ်လိုက်ယုံပါဘဲ .. ဒါဆိုခေါ်ကြည့်ရအောင် ....
တိန်.. အဲ့မှာ စတွေ့ တာ .. အမှန် mhu ဆိုရင် Bigboss လို့ ပေါ်ရမှာ ဦးဗိုက်ကြီးပေါ်လာတယ်.. :D HC က ပ၇ိုဂ၇မ်မာတယောက်ဖြစ်တဲ့ Ex094 ကရှင်းပြထားပါတယ်.. ကျွန်တော့် ဟူးမန် (လူသား ငိငိ ) တွေ Number တွေစရေရင် 123 ကနေစရေတယ်နော်.. ဒါမဲ့ Computer က ပရိုဂရမ်မာတွေက စရေရင်0က နေစရေပါတယ်.. 0,1,2,3,4 ပေါ့ .. ဟုတ်မဟုတ် အောက်မှာ ကြည့်ရအောင် ...
ဒါန့် ဒါန် :D ဟုတ်တယ်နော်..0လို့ ခေါ်မှာ ဦးဒုတ်ရှေ့ ကထွက်လာပါတယ် :D ဒါဆိုရင် ဦးမာစတာဂိ ကိုခေါ်ကြည့်ရအောင်.. ဘယ်လောက်ထင်တုန်းး (တမျိုးတွေးနဲ့Items နံမှတ်ကြောပါတယ် :D ) Master Leet ရဲ့ Items number က3ပါ .. ဒီတော့ mhu list ထဲက Master Leet ကိုခေါ်သုံးမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ Items နံပါတ်ဖြစ်တဲ့3နဲ့ ခေါ်ကြည့်ပါမယ်...
ဒန် ဒန် :D မှန်တယ်နော်.. အဲ့လောက်ဆိုနားလည်လောက်ပါပြီ... အောက်ကList ထပ်ကြည့်ပါ ...
0 = Bigboss , 1 = Mhu Nullbyte ,2= Xero Mhu ,3= Master Leet ,4= 1o1or1not1 ,5= liT2le
ဒါဆိုပိုနားလည်လောက်ပါပြီ...ကျန်တော်တို့တည်ဆောက်ထားတဲ့ list ထဲက ကြိုက်ရာ Element ကိုခေါ်သုံးနိုင်ပါပြီ... နောက်တနည်းက Slicing မှာလဲ Number တွေကိုပြောင်းပြန်ခေါ်ခဲ့ဘူးပါတယ်.. ဒီမှာလဲ ထပ်ခေါ်ကြည့်ရအောင် .. ရ မလားပေါ့ .. :D အောက်မှာကြည့်ပါ ...
ဒန့် ဒန် .. ရတယ်နော်.. -4 ခေါ်လိုက်တာ ဘ၇ို Xero ထွက်လာပါတယ်... ... ဒါဆိုရင် နောက်က စရေလို့ ရမဲ့ Items Number Slicing မှာလဲပြောခဲ့ပြီးပါပြီ (ဒီမှာထက်မပြောတော့ပါဘူး). . ဒါဆိုရင် နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်တော် liT2leနော် .. ဒါဆို liT2le ဆိုတဲ့ Element ကနေ စရေရမှာပါ၊ အဲ့ဒီ့ liT2le ကို number အနေနဲ့ -1 လို့သတ်မှတ်ပါတယ်၊ အတည့်အတိုင်းခေါ်တုန်းကလို -0 ကနေတော့မစဘူးနော်.. ငိငိ ကျန်တော် Ex094 ကိုဒီလိုမေးဘူးပါတယ် (တုံးချက်က) :D မေးပြီး ကိုယ့်ဘာကိုပြန်ရှက်သွားတယ် ငိငိ သချာင်္အဲ့လောက်ကျွမ်းတာ :D
ဒါဆိုရင် နောက်ဆုံးက Element ဖြစ်တဲ့ liT2le ကို -1 ကျွန်တော့်ရှေ့က 1o1or1not1 ကို -2 (ရှယ်ဘဲ ငိငိ) အဲ့လို အဲ့လို ပါ.. အတည့်ရေတုန်းက အပေါ်က ဘားလေးအတိုင်းရှင်းပြထားပါတယ်... ခုနောက်ကနေစရေမယ်ဆိုရင် အောက်ကဘားလေးကိုပြန်ကြည့်ပါ ...
-6 = Bigboss , -5 = Mhu Nullbyte , -4 = Xero Mhu , -3 = Master Leet , -2 = 1o1or1not1 , -1 = liT2le
Ok ~ ဒီလောက်ဆို နားလည်လောက်ပြီနော်.. .. ကြိုက်တဲ့ - ကိုထည့်ပြီး ကြိုက်တလိုခေါ်လို့ ရပါပြီ ... :D Slicing ကိုသေချာဖတ်ပြီးသွားရင် Sequences ကအရမ်းလွယ်သွားပါတယ်.. အမျိုးမျိုး ခေါ်ကြည့်ရုံပါဘဲ ..
>>> mhu[0:2] # ဒါက0ကနေ2အထိခေါ်တာပါ
['Bigboss', 'Mhu Nullbyte']
>>> mhu[0:6:2] # ဒါက0ကနေ limit6ထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်..အနောက်က 2ကတော့ 2လုံးစီကျော်ခေါ်တာပေါ့ ...
['Bigboss', 'Xero Mhu', ' 1o1or1not1 ']
အကုန်ရတယ်နော် ... Slicing ကလုပ်တလိုအကုန်ရပါတယ်.. String နဲ့Number ဘဲကွာပေါ့မယ်... :D
Copyright 2O13 by liT2le(mhu) @ Python Think Tank
::.Sequences .:: Sequences ဆိုတာ List နဲ့ တူတူပါဘဲ .. http://docs.python.org/2/tutorial/introduction.html#lists မှာ list အကြောင်းကိုရေးထားပါတယ်.. .. .. Python knowsanumber of compound data types, used to group together other values. The most versatile is the list, which can be written asalist of comma-separated values (items) between square brackets. List items need not all have the same type. ရှင်းရှင်းပြောရ၇င် Sequence တွေက အချက်အလက်တွေအများကြီးကိုသိုလှောင်ခွင့်ပေးတာပါ ... Slicing မှာလဲ ဒီလိုပါဘဲ .. (Slicing post အောက်မှာတင်ထားပါတယ်) ကျွန်တော်တို့ နားလည်အောင်ပြောရင် Sequence က ကိုယ့်Data တွေကိုတစ်စုတစည်းထဲ စုစည်းနိုင်ပါတယ်.... ပိုနားလည်သွားအောင် အောက်မှာ List တခုဆောက်လိုက်ပေါ့မယ်. . . >>> mhu=['Bigboss','Mhu Nullbyte','Xero Mhu','Master Leet',' 1o1or1not1','liT2le'] အဲ့မှာကျွန်တော် list ဆောက်လိုက်ပါပြီ... mhu ကတော့ တည်ဆောက်လိုက်တဲ့ Group List ရဲ့ Name ပါ ၊ နောက်က [ ] ဒေါင့်ကွင်းထဲမှာထည့်ထားတာက mhu member တွေပါ ... items စုစုပေါင်း 6ယောက်ရှိတယ်နော် .. (အဲ့ ၆ယောက်ကို square brackets ထဲထည့်ထားတယ်နော်) တစ်ခုစီကို String တွေဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ကို အဖွင့် အပိတ်ကော်မာထဲထည့်ပေးရပါတယ် . . ဘာလို့ လဲဆိုရင် String ဖြစ်လို့ လေ... (သူပြောမှရှင်းသွားတာဘဲ :D) . အပေါ်က Eng လိုရေးထားတဲ့စာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ ... Ok ~ ဒါဆိုရင် အပေါ်က Items မှာ6ခုရှိတယ်နော် .. တစ်ခုစီမှာ သူ့ကို ခေါ်သုံးလို့ရတဲ့ Number တွေ ရှိပါတယ် ... အဲ့Number တွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ပေးရမလဲ ?? အဲ့ဒါက Python ပရိုဂရမ်မာ က အော်တိုမစ်တစ် သတ်မှတ်ပြီးသားပါ .. ကိုယ်သတ်မှတ်ပေးရမှာမဟုတ်ပါဘူး . . . ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ list တွေကိုခေါ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ . အဲ့ List တစ်ခုစီမှာ သူ့ကို ခေါ်သုံးလို့ရတဲ့ နံပါတ်တွေ ကိုယ်စီရှိပါတယ် ... အဲ့မှာကိုယ်ခေါ်ချင်တဲ့ လူ (Items) ကို သက်ဆိုင်ရာNumber ကိုတွဲပြီးခေါ်လိုက်ယုံပါဘဲ .. ဒါဆိုခေါ်ကြည့်ရအောင် .... >>> mhu 'Mhu Nullbyte' တိန်.. အဲ့မှာ စတွေ့ တာ .. အမှန် mhu ဆိုရင် Bigboss လို့ ပေါ်ရမှာ ဦးဗိုက်ကြီးပေါ်လာတယ်.. :D HC က ပ၇ိုဂ၇မ်မာတယောက်ဖြစ်တဲ့ Ex094 ကရှင်းပြထားပါတယ်.. ကျွန်တော့် ဟူးမန် (လူသား ငိငိ ) တွေ Number တွေစရေရင် 123 ကနေစရေတယ်နော်.. ဒါမဲ့ Computer က ပရိုဂရမ်မာတွေက စရေရင်0က နေစရေပါတယ်.. 0,1,2,3,4 ပေါ့ .. ဟုတ်မဟုတ် အောက်မှာ ကြည့်ရအောင် ... >>> mhu 'Bigboss' ဒါန့် ဒါန် :D ဟုတ်တယ်နော်..0လို့ ခေါ်မှာ ဦးဒုတ်ရှေ့ ကထွက်လာပါတယ် :D ဒါဆိုရင် ဦးမာစတာဂိ ကိုခေါ်ကြည့်ရအောင်.. ဘယ်လောက်ထင်တုန်းး (တမျိုးတွေးနဲ့Items နံမှတ်ကြောပါတယ် :D ) Master Leet ရဲ့ Items number က3ပါ .. ဒီတော့ mhu list ထဲက Master Leet ကိုခေါ်သုံးမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ Items နံပါတ်ဖြစ်တဲ့3နဲ့ ခေါ်ကြည့်ပါမယ်... >>> mhu 'Master Leet' ဒန် ဒန် :D မှန်တယ်နော်.. အဲ့လောက်ဆိုနားလည်လောက်ပါပြီ... အောက်ကList ထပ်ကြည့်ပါ ...0= Bigboss , 1 = Mhu Nullbyte ,2= Xero Mhu ,3= Master Leet ,4= 1o1or1not1 ,5= liT2le ဒါဆိုပိုနားလည်လောက်ပါပြီ...ကျန်တော်တို့တည်ဆောက်ထားတဲ့ list ထဲက ကြိုက်ရာ Element ကိုခေါ်သုံးနိုင်ပါပြီ... နောက်တနည်းက Slicing မှာလဲ Number တွေကိုပြောင်းပြန်ခေါ်ခဲ့ဘူးပါတယ်.. ဒီမှာလဲ ထပ်ခေါ်ကြည့်ရအောင် .. ရ မလားပေါ့ .. :D အောက်မှာကြည့်ပါ ... >>> mhu[-4] 'Xero Mhu' ဒန့် ဒန် .. ရတယ်နော်.. -4 ခေါ်လိုက်တာ ဘ၇ို Xero ထွက်လာပါတယ်... ... ဒါဆိုရင် နောက်က စရေလို့ ရမဲ့ Items Number Slicing မှာလဲပြောခဲ့ပြီးပါပြီ (ဒီမှာထက်မပြောတော့ပါဘူး). . ဒါဆိုရင် နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်တော် liT2leနော် .. ဒါဆို liT2le ဆိုတဲ့ Element ကနေ စရေရမှာပါ၊ အဲ့ဒီ့ liT2le ကို number အနေနဲ့ -1 လို့သတ်မှတ်ပါတယ်၊ အတည့်အတိုင်းခေါ်တုန်းကလို -0 ကနေတော့မစဘူးနော်.. ငိငိ ကျန်တော် Ex094 ကိုဒီလိုမေးဘူးပါတယ် (တုံးချက်က) :D မေးပြီး ကိုယ့်ဘာကိုပြန်ရှက်သွားတယ် ငိငိ သချာင်္အဲ့လောက်ကျွမ်းတာ :D ဒါဆိုရင် နောက်ဆုံးက Element ဖြစ်တဲ့ liT2le ကို -1 ကျွန်တော့်ရှေ့က 1o1or1not1 ကို -2 (ရှယ်ဘဲ ငိငိ) အဲ့လို အဲ့လို ပါ.. အတည့်ရေတုန်းက အပေါ်က ဘားလေးအတိုင်းရှင်းပြထားပါတယ်... ခုနောက်ကနေစရေမယ်ဆိုရင် အောက်ကဘားလေးကိုပြန်ကြည့်ပါ ... -6 = Bigboss , -5 = Mhu Nullbyte , -4 = Xero Mhu , -3 = Master Leet , -2 = 1o1or1not1 , -1 = liT2le Ok ~ ဒီလောက်ဆို နားလည်လောက်ပြီနော်.. .. ကြိုက်တဲ့ - ကိုထည့်ပြီး ကြိုက်တလိုခေါ်လို့ ရပါပြီ ... :D Slicing ကိုသေချာဖတ်ပြီးသွားရင် Sequences ကအရမ်းလွယ်သွားပါတယ်.. အမျိုးမျိုး ခေါ်ကြည့်ရုံပါဘဲ .. >>> mhu[0:2] # ဒါက0ကနေ2အထိခေါ်တာပါ ['Bigboss', 'Mhu Nullbyte'] >>> mhu[0:6:2] # ဒါက0ကနေ limit6ထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်..အနောက်က 2ကတော့ 2လုံးစီကျော်ခေါ်တာပေါ့ ... ['Bigboss', 'Xero Mhu', ' 1o1or1not1 '] အကုန်ရတယ်နော် ... Slicing ကလုပ်တလိုအကုန်ရပါတယ်.. String နဲ့Number ဘဲကွာပေါ့မယ်... :D #Have Fun :) Copyright 2O13 by liT2le(mhu) @ Python Think Tank
Java | 43 min ago | 1.23 KB
C# | 49 min ago | 3.24 KB